Boeny: navoaka ny andiany faharoa tao amin’ny Ivo-toerana fiofanana ho an’ ny Vehivavy eto Mahajanga | Région Boeny
Navoaka tamin’ny fomba ofisialy ny alakamisy 23 jona 2016 ireo vehivavy miisa 60 nandrato fianarana tao amin’ny ivo-toerana fiofanana arak’asa ho an’ny vehivavy eny Mangarivotra, izay andian’ny faha-roa misalotra ny anarana « VONONA ».
Marihina fa fanomezana avy amin’ny vadin’ny filoham-pirenena, Rtoa Voahangy Rajaonarimampianina ity trano fiofanana arak’asa ity, tamin’ny 22 mai 2015. Efa feno heritaona ny nitsanganany ary mpianatra efa miisa 115 no notolorana marim-pakasitrahana tao.
Sampam-piofanana telo no hita ao amin’izany ivotoerana izany, ny fianarana manjaitra, ny mahandro sakafo ary ny fianarana solosaina. Miisa 15 ny nanaraka ny fanjairana, dimy ny fianarana mahandro ary 40 ny fiofanana ara-tsolon-tsaina.
Nanotrona ny lanonana famoahana ny Tale iraisam-paritry ny fiofanana arak’asa eto Mahajanga, ny solotenan’ny Ben’ny tanànan’ny ambonivohitr’I Mahajanga, ny avy ao amin’ny Foibem-paritry ny Mponina eto Boeny.
10 000 ariary isam-bolana ny sara-pianarana, efa-bolana ny faharetan’ny fianarana ato amin’ity ivo-toerana fiofanana arak’asa ho an’ny vehivavy ity, mihoatra ny 18 taona raisina, ary tsy mifidy saranga na koa ny efa niasa na tsia fa raisina avokoa. Ka izay mahavita roa volana dia omena fanamarinam-piofanana ary ny mahavita ny efa-bolana dia zaraina ny marim-pahaizam-piofanana. Marihina fa ara-panjakana ny marim-pahaizana azo amin’izany.
Hanomboka amin’ny alatsinainy 04 jolay 2016 ho avy izao ny fidiran’ny fiofanana manaraka hoy ny Talen’ny ivo-toerana fiofanana ao Mangarivotra ity, Atoa Ramasindrano Andrianarimanana.